ငါက Creative Marketing ကိုကြိုက်ဆဲတစ် ဦး တည်းလား
သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 2, 2010 တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 21, 2015 Douglas Karr
ငါမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်ကားမောင်းခဲ့သည်, ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကိရိယာများအတွက်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ရှိ၏။ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ဟာပုံမှန်ကြော်ငြာဖြစ်မယ့်အစား၊ ပို့စ်တစ်ခုတက်လာပြီးအမှန်တကယ်ကိရိယာသည်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်areaရိယာ၌ရှိသည်။ လက်မောင်းသည်မြေပြင်မှလာနေသည်ဟုထင်ရသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သံတူလိုအပ်လျှင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမှတ်မိကောင်းမှတ်မိလိမ့်မည်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာရှာဖွေမှုလုပ်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာတွေရဖို့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်သက်ဆိုင်ရာရလဒ်ပေးသည့်ဂူဂဲလ်မှကျွန်ုပ်ထက်ပိုမိုသောသော့ချက်ကျသောသော့ချက်ကျသောသုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ကိုခြေရာခံခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုသက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာများနှင့်တင်ပြခြင်းအတွက်ကြော်ငြာရှင်တစ် ဦး အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းပိုရှိသည်။
ငါကြော်ငြာရှင်များကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တန်ချိန်ပေးတာကြိုက်တယ် သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပိုကောင်းအောင်၊ ငါ့လူ ဦး ရေစာရင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကြော်ငြာတွေကိုပေးဖို့လုပ်တယ်။ စမတ်ကြော်ငြာတွေလိုချင်တယ် ငါအသိဉာဏ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရန်၊ အာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်၎င်းကိုမောက်စ်ပေါ်သို့လက်ညှိုးထိုးနိုင်သည့်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ကြော်ငြာလှုံ့ဆော်ရေးကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။
ငါတစ်ယောက်တည်းလား ယခုတွင်ငါသည်အွန်လိုင်းနီးပါးအရာအားလုံးအဘို့အစျေးဝယ်။ ငါ့ဘဝရှိအခြားစတိုးဆိုင်တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှမသွားခဲ့ရင်ငါမသွားဘူး။ ငါကြော်ငြာကိုမြင်တော့ငါဝယ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, ငါအပေါ်ထိုး။ ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုချစ်ပြီးငါကြော်ငြာကိုချစ်။
ပျင်းရိတဲ့စျေးကွက်သမားတွေကြောင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့ကြော်ငြာတွေဟာဆိုးရွားလှတဲ့ရမ္မက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအန္တာရာယ်ပြုခြင်း (သို့) စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်နှင့်ပစ်မှတ်ထားရန်အပိုထပ်ဆောင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်မည့်အစား၊
စျေးကွက်သမားများသည်မည်သည့်လမ်းကြောင်းကို ဦး တည်နေသည်ကိုသိရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သူတို့ ဦး တည်နေပါကသူတို့သည်သင့်အားလမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ယင်ကောင်ကဲ့သို့ငါးမျှားနေသောငါးနှင့်တူသည်။ ကကိုက်အကွာအဝေးအတွင်းပါပဲသည်အထိ။ ထိတ်လန့်စရာကောင်းသောစျေးကွက်များကပိုက်ကွန်ကိုသာပစ်လိုက်ကြသည် လုံလောက်တဲ့ခဲမရနိုင်ပါသလား? ပိုကြီးတဲ့အသားတင်! မလုပ်နိုင်သေးဘူးလား ပိုက်ကွန်များများ သူတို့ရုန်းကန်ရင်းထွက်ပြေးရန်ကြံစည်နေစဉ်သူတို့၏ငါးများကိုဆွဲထုတ်ကြသည်။
Tags: ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ကြော်ငြာkeyword ကိုသုတေသနပြုအွန်လိုင်းကြော်ငြာခြေရာခံခြင်း
WordPress - ဗွီဒီယိုမျက်နှာပြင်အကောင့် Popup တစ်ခုလုပ်နည်း
2:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 38
2:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 48
ရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်တာကငါဟာဘယ်လောက်ပဲရည်ရွယ်ထားပါစေကြီးကျယ်တဲ့ကြော်ငြာတွေကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတာပါပဲ။ တကယ်တော့၊ ကြော်ငြာရှင်တစ်ယောက်ကငါ့ကိုပစ်မှတ်ထားဖို့ကြိုးစားလေလေ၊ Microsoft ထုတ်ကုန်အမြောက်အမြားကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူတူပင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်လိုချင်သောအရာကိုမျှော်လင့်ရန်အလွန်ကြိုးစားသည် (ကြည့်ရှုခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပုံစံချခြင်း!), သို့သော်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုကောင်းမွန်စွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
ထိုနည်းတူစွာပင်တိုက်ရိုက်ရောင်းချရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းထက်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစိတ်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားသည့်အမှတ်တံဆိပ်ကြော်ငြာအတွက်လည်းအလားတူပင်။ အကောင်းဆုံးမှာ၎င်း၏ထိရောက်မှု, အဆိုးဆုံးမှာ၎င်း၏လှည့်စား။
ငါအတွက်, ကြော်ငြာသူများ, ကြော်ငြာတဲ့အခါသူတို့အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုပြီးပျက်စီးစေတယ်။ သူတို့ရဲ့နည်းနည်းလေးလှည့်စားဖို့ကြိုးစားနေသလိုခံစားရတယ်။ နက်ရှိုင်းစွာငါလူအများစုအလားတူခံစားရထင်ပါတယ်။ သူတို့သည်ကြော်ငြာသူများ၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုညည်းတွားစွာ ၀ ယ်ကြသည်။ သို့သော်အခြားနည်းလမ်းများရှိသည့်အခါ ပို၍ ရိုးသားပြီးပွင့်လင်းမြင်သာသောအမှတ်တံဆိပ်များထံမှ ၀ ယ်လိုသည်။
ငါကြော်ငြာလုပ်ငန်းကိုလက်ခံရန်အလွန်ခက်ခဲသည်ဟုထင်သည်၊ သို့သော်ယခုကြော်ငြာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ချန်နယ်များနှင့်နည်းပညာများစွာဖြင့်ကြော်ငြာအားလုံး၏တန်ဖိုးကျဆင်းနေသည်။ ပင် "ကောင်းသော" သူတွေကို။
2:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 12
Deckerton, ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောရှုထောင့်ပဲ! သင်သိတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာမည်မျှကိုသင်မသိမသာဆက်သွယ်မှုရှိနေသည်ကိုသတိမပြုမိဘဲမသိဘဲကျွန်ုပ်အားသိလိုပါသည်။
2:2010 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 43
Doug ငါနှင့်အတူရှိနေတယ် ကြော်ငြာများသည်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်များနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများဖြင့်ဖမ်းယူသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသည်။ အဖြစ်မှန်ကတော့ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်ဝယ်သည်။ ကောင်းမွန်သောကြော်ငြာကကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။